पार्टी मिल्न नदिने भनिएपछि पोखरेल र महराको यस्तो दुखेसो – Etajakhabar
पार्टी मिल्न नदिने भनिएपछि पोखरेल र महराको यस्तो दुखेसो
काठमाडौं, १७ माघ । पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगानालगायत बूढाखाडा नेताले बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा दुई दिने आवासीय भेला आयोजना गरेका छन् ।
सन् २००४ देखि द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना र मेलमिलापका लागि भन्दै यूरोपियन युनियन, स्विस सरकार र युएसएडले दिँदै आएको पैसा त्यस्ता जमघटमा खर्च हुँदै आएको छ । यस्तो भेलामा स्वभाविक रुपले थरीथरीका मान्छेले थरीथरीका कुरा गर्ने नै भए । प्रोजेक्ट समापनको अवसरमा आयोजित त्यो भेलामा निकै रमाइला तर गम्भीर कुरा उठेका छन् ।
यसमध्ये आइतबार बिहान एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराबीचको संवाद उल्लेखनीय छ । यी नेताले चिया पिउँदै भनेका थिए- ‘ल अब एमाले र माओवादीमा पार्टी एकताविरोधी तपाईं र म अरे ! हामी प्रचण्ड र ओलीलाई मिल्न नदिने पात्र रे ! त्यसरी आरोप लगाउँछन् भने हामी चुप बसौं । जे-जे गर्छन्, हुन्छ हुन दिऊँ । हामी दुई भाइ साइड लागाै‌ ।’
ठट्टाको शैलीमा कुराकानी अघि बढाउँदै उनीहरुले यसरी मन दुःखाएका हुन् । ‘घाँडो, बाधकको बिल्ला किन भिर्ने ? नखाएको विष केलाई झेल्ने ? भैगो, अरुको इच्छाको तगारो नबनौं ।’ त्यस्तैमा कसैले सोध्यो, ‘खासमा एकताको कुरा अड्किएको चाहिँ कहाँनेर हो ?’ महराको जवाफ थियो, ‘टाउकैमा हो अड्किएको ।’ यहीँनेर लक्ष्मणलाल कर्णले भने एउटा डरलाग्दो वाक्य उच्चारण गरे- ‘अब प्रदेश नम्बर २ र केन्द्रीय सरकारबीच दह्रो वार सुरु हुन्छ । पहिले पो हामी सडकमा थियौं, अहिले त सत्तामा छौं । अब यो युद्ध विगतको भन्दा डरलाग्दो र निकै घमासानको हुन्छ ।’
शक्ति बस्नेत, अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत, जितेन्द्र सोनाल, केशव झा पनि उपस्थित थिए । त्यहीँनेर के प्रसंग उठ्यो भने एमाले र माओवादीबीच एकता नभई वाम सरकार बन्दैन । बनिहाले पनि १८ महिनाभन्दा बढी जाँदैन र मध्यावधि चुनाव हुन्छ । अनि ०५२ सालको अवस्थामा मुलुक फर्कन्छ । त्यसपछि विप्लवले ‘देख्यौ त, क्रान्ति अधुरो छ, जनयुद्ध सकिएकै छैन ?’ भनेर मैले पहिले नै भनेको होइन भन्दै खुशियाली मनाउन थाल्नेछन् ।जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
विगतका कुरा सम्झँदै सहभागीहरुले टिप्पणी गरे, ‘जनयुद्धकालमा पहिलो र दोस्रो वार्ता किन सफल भएन भने त्यसबेला माओवादी र सरकारले अडान छाडेनन् तर तेस्रो वार्ता सफल भयो किनकी त्यतिबेला दुवै पक्ष लचिलो भइदिए । अहिले पनि एउटालाई अध्यक्ष नभई नहुने, अर्कोले अध्यक्ष पद छाड्दै नछाड्ने भएपछि यो विवादले वाम एकतालाइृ सार्थक बनाउला कि पछि फर्काउला ?’ यसरी त्यहाँ आसन्न संकटबारे गम्भीर चिन्तन, मनन, विमर्शदेखि दलगत र राष्ट्रिय राजनीतिका अनेक पक्षमा छलफल चलेको स्रोत बताउँछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १७, २०७४ समय: १०:०७:१३